Wararka - Isbarbardhiga faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka dhowr hab oo wax soo saar oo waaweyn ee alaabta ceeriin ee caagga ah
Isbarbardhigga faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka dhowr hab oo wax soo saarka waaweyn ee alaabta ceeriin ee caagga ah
Mabda'a mideynta cirbadeynta ayaa ah in lagu daro waxyaabo ka kooban granular ama budada aaladda mashiinka duritaanka. Maaddada waa la kululeeyaa oo la dhalaaliyaa oo noqdaa mid firfircoon. Hoosta horumarka furka ama bistoolada mashiinka duritaanka, waxay galeysaa daloolka caaryada iyadoo loo marayo sanka iyo nidaamka tuurista caaryada. , Way adkaatay oo qaabeysay daloolka caaryada. Waxyaabaha saameeya tayada waxqabadka wax lagu duro: cadaadiska duritaanka, waqtiga duritaanka, heerkulka duritaanka.
1. Wareegga wax-qabadka gaaban, wax-soo-saarka wax-soo-saarka sare, iyo otomaatiga fudud
2. Qaybo balaastik ah oo leh qaabab isku qasan, cabir sax ah, iyo biraha ama biraha la gelinayo ayaa la sameysan karaa.
3. Tayada badeecadu waa mid deggan.
4. Caadooyin ballaaran.
1. Qiimaha qalabka wax lagu duro ee duritaanka ayaa ka sareeya.
2. Qaab dhismeedka caaryada duritaanka ayaa qasan.
3. Qiimaha wax soo saarka sarreeya, wareegga wax soo saarka dheer, oo aan ku habboonayn wax soo saarka dufcad keliya iyo yar ee qaybaha balaastigga ah.
Waxyaabaha warshadaha ka mid ah, waxyaabaha la duray ee la duray waxaa ka mid ah: alaabada jikada (qasacadaha, fijaannada, baaldiyo, dheryo, weelka miiska, iyo weelal kala duwan), qolofka qalabka korontada (timo engejiyeyaasha, nadiifiyeyaasha faakiyuutaha, kuwa cuntada qasan, iwm.), Ciyaaraha iyo ciyaaraha, Gawaarida Waxsoosaarka warshadaha kala duwan, qaybo ka mid ah alaabooyin kale oo badan, iwm.
Wax taaj oo kale
Waxyeelada Extrusion: sidoo kale loo yaqaan wax taaj oo kale extrusion, waxay inta badan ku habboon tahay wax taaj oo kale ee thermoplastics, laakiin sidoo kale ku habboon u wax taaj oo kale ee qaar ka mid ah thermosetting iyo balaastigga la xoojiyay la dhaqdhaqaaq fiican. Nidaamka wax qaabeynta ayaa ah in la isticmaalo fur wareeg ah si looga soo saaro walxaha kuleylka leh ee kululeeyaha leh ee dhinta iyadoo loo baahan yahay qaabka isweydaarsiga loo baahan yahay, ka dibna waxaa qaabeeya qalabka cabbiraadda, ka dibna loo sii maraa qaboojiyaha si uu u adkeeyo una adkeeyo si aad u noqotid qaabka loo baahan yahay ee iskutallaabta ah. alaabta
Astaamaha geedi socodka:
1. Qiimaha qalabka oo hooseeya;
2, hawlgalku waa sahlan yahay, hawshu waa fududahay in la xakameeyo, waana sahlan tahay in la dhammaystiro wax soo saarka otomaatiga ah ee isdaba jooga ah;
3. Waxtarka wax soo saarka sare; labis iyo tayada wax soo saarka wanaagsan;
4. Ka dib markii la beddelo dhimashada madaxa mashiinka, alaabooyinka ama alaabooyinka dhammaadka dhammaaday oo leh qaabab kala duwan oo iskutallaab ah ayaa la samayn karaa.
Aagga Codka jamhuuriyadda soomaaliyaqorshaynta wax soo saarka, wax taaj oo kale extrusion uu leeyahay ku dhaqanka xoog leh. Waxyaalaha la soo saaray waxaa ka mid ah tuubooyin, filimaan, ulaha, qalabka guryaha lagu keydiyo, suumanka fidsan, shabaqyada, weelasha godadka, daaqadaha, muraayadaha albaabada, taarikada, xarkaha fiilooyinka, qalabka guryaha lagu keydiyo iyo qalabka kale ee la shaandheeyey.
afuufa wax ku shubid
Qaab dhismeedka afuufa: waxyaabaha dhalaalaya ee kuleylka leh ee ka soo baxa qalabka wax lagu shubo ayaa lagu xirayaa caaryada, ka dibna hawada ayaa lagu afuufayaa maaddada. Waxyaabaha la dhalaalay waxay ku sii ballaaranayaan saameynta cadaadiska hawada waxayna ku dhegan yihiin derbiga saabka caaryada. Qaboojinta iyo adkeynta ayaa noqda habka qaabka wax soo saarka la doonayo. Wax taaj oo kale ayaa loo qaybiyaa laba nooc: afuufida filimka iyo afuufidda godka:
Filimaanta afuufaya waa habka balaastigga lagu shubay tuubo dhuuban oo dhuuban oo ka imanaya farqiga wareegga dhimashada, iyo ku afuufida hawo cadaadis godka gudaha ee tuubbada khafiifka ah ee ka soo baxda daloolka dhexe ee dhinta si loogu buuxiyo dhuunta dhuuban dhexroor. Filim jilicsan oo waaweyn (oo badanaa loo yaqaan tuubbo xumbo) ayaa la duubay kadib qaboojinta.
Wax taaj oo kale dharbaaxo:
Mashiinka wax lagu duubo ee Hollow waa farsamooyin wax lagu nadiifiyo oo labaad oo isticmaala cadaadiska gaaska si uu u buufiyo cirbadda u eg caarada ee ku xiran godka caaryada ee alaabta godka ah. Waa hab lagu soo saaro alaab caag ah oo godan. Sida laga soo xigtay hababka wax soo saarka kala duwan ee parisons, wax taaj oo kale dharbaaxo godka waxaa ka mid ah wax taaj oo kale duray extrusion, wax taaj oo kale duray duray, iyo fidin wax taaj oo kale.
: sicir bararka
(2) Wax taaj oo kale duray duritaanka: parison loo isticmaalo waxaa lagu sameeyay by wax taaj oo kale duray. Barxadda ayaa ku hartay caaryada asaasiga ah ee caaryada. Ka dib markii la xiro caaryada leh caaryada dharbaaxo, hawo cufan ayaa laga soo saaray caaryada asaasiga ah si loo buuxiyo parison, qabow, oo loo dhigo sheyga si loo helo badeecada.
(3) Kalabixinta dharbaaxo jabinta: Dhig parison-ka kuleylka kuleylka kuleylka ku jira caaryada dharbaaxo, ku kala bixi si isdaba joog ah ul fidsan, oo kala bixi oo ku buuxi hawo cufan jihada dhinaca si aad u hesho habka Badeecada.
Badeecadu waxay leedahay dhumucda derbiga oo isku mid ah, miisaan hooseeya, ka-shaqeynta ka dib, iyo geesaha qashinka yar yar; waxay ku habboon tahay soo-saarista alaabooyin yaryar oo sax ah oo baaxad weyn leh.
Wax taaj oo kale ayaa loo adeegsadaa soo saarida wasakhda caaga ah; wax taaj oo kale oo wax lagu duubo ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro badeecooyin caag ah oo bannaan (dhalooyinka, foostooyinka wax lagu duubo, qasacadaha lagu buufiyo, haamaha shidaalka, daasadaha, waxyaabaha carruurtu ku ciyaarto, iwm). Ku
Maqaalka waxaa laga soo saaray warshadaha caaga ah ee Lailiqi. URL-ka maqaalkan: http://www.lailiqi.net/chuisuzixun/548.html